Naratra nandritra ny fihetsiketsehana manohitra ny “tsy maintsy” hanaovana vaksiny ho an’ny rehetra ny praiminisitra ao Saint-Vincent sy Grenadines · Global Voices teny Malagasy
Sahabo ho sivy isanjaton'ny mponina no vita vaksiny tanteraka
Voadika ny 11 Aogositra 2021 5:16 GMT
Fitsindrona miaraka amin'ny vaksinin'ny COVID-19. Sary avy amin'i Jernej Furman tao amin'ny Flickr, CC BY 2.0.
Rehefa nidina an-dalambe ny olom-pirenenan'i St.Vincent sy Grenadines ny 5 Aogositra ho fanoherana ny tolokevitra fanovana ny lalàna momba ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny firenena dia lasibatra tamin'izany ny praiminisitra Ralph Gonsalves. Voalaza fa notorahan'olona iray tao anaty vahoaka vato izy raha teny an-dàlana ho any amin'ny parlemanta iny ary naratra teo amin'ny lohany taorian'ny fahatezerana noho ny tolokevitra fanesorana ilay teny hoe “an-tsitrapo” alohan'ny teny hoe “fanefitra” ao amin'ilay lalàna, ary noho ny ahiahy momba ny hoe mbola ho afa-miala ve sa tsia amin'ny fanaovana vaksinin'ny COVID-19 ihany koa ny vahoaka.
Naratra androany ny praiminisitra ao St. Vincent sy Grenadines, Ralph Gonsalves, nandritra ny fihetsiketsehana tao Kingstown. Voalaza fa nanohitra ny tolokevitra amin'ny fanovana ny lalàna momba ny fahasalamana ny fihetsiketsehana, izay hahatonga ny fanaovana vaksinin'ny coronavirus ho tsy maintsy atao ho an'ny ambaratongan'ny mpiasa sasany.
Efa olana ho an'ny nosy izay ahitana an'i St. Vincent sy Grenadines ny fisalasalana amin'ny fanaovana vaksiny, hany ka nataon'ny governemanta fanomezana ho an'ny firenena mpifanolo-bodirindrina aminy ao Karaiba ireo vaksiny fa tsy nolanilaniampoana. Tamin'ny 4 Aogositra , nahitana trangana COVID-19 miisa 53 tao amin'ity firenena izay manana mponina maherin'ny 110 000 mahery ity 12 no totalin'ireo isan'ny matin'ilay virosy. Nanamarika ny fanavaozam-baovao avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana fa olona miisa 9.998 no efa nahavita vaksiny feno (manodidina ny 9 isan-jaton'ny mponina), ary 15.768 hafa no nahavita ny andiany voalohany.
Raha nilaza ny praiminisitra fa tsy voatery atao ny vaksiny, “amin'ny heviny hoe hisy ny sazy heloka bevava na ny karazana sazy sivily raha tsy manao izany,” dia manambara ilay tolokevitra fanitsiana ny lalàna fa ilaina ho an'ny mpiasan'ny seha-panjakana ifotony mba ho vita fanefitra izany. Nampiany fa mifandraika amin'ny fepetran'ny hamehana ara-pahasalamana ity hetsika ity, ary nilaza izy fa “manohitra ny tombontsoan'ny firenena” izay rehetra mandà izany.
‘Foano ny volavolan-dalàna’
Nanondro ity fihetsiketsehana manokana ity ho avy amin'ny antoko mpanohitra ao amin'ny firenena ny tatitra sasany. Manohitra ihany koa ilay fanitsiana lalàna ny hetsiky ny sendikan'ny mpiasa mavitrika ao amin'ny nosy. Nilaza izy ireo fa tsy “manohitra ny vaksiny izany fa mpomba ny fahafahana misafidy” izany. Nanohana ny hetsi-panoherana “hanafoanana ity volavolan-dalàna ity” ny filohan'ny sendikan'ny mpiasa-panjakana, ​​Elroy Boucher, satria manitsakitsaka ny zon'ny vahoaka izany hoy izy.
Mandritra izany fotoana izany, nampiditra ny resaka fivavahana tamin'ny olana ny filohan'ny Fikambanan'ny polisy misahana ny fiahiana ara-tsosialy, Brenton Smith, tamin'ny filazany fa “firenena Kristiana ny firenena SVG ary mbola maro no mivavaka” ny amin'ny hoe hanao vaksiny sa tsia. Ny filohan'ny fikambanan'ny Mpampianatra ao amin'ny firenena, Oswald Robinson, kosa niampanga ny governemanta ho tsy nanamora ny fifanakalozan-kevitra momba io raharaha io .
Vetivety dia nanomboka niparitaka nanerana ny faritra ny horonantsary taorian'ny fanafihana ny praiminisitra, ary maro tamin'izany no zaraina ao tamin'ny WhatsApp:
Nandefa lahatsarin'ilay tranga ihany koa ny vondrona Facebook Caribbean Lives Matter ary naneho hevitra hoe:
Tsy tokony atao an-tery ny fanaovana vaksiny. Tsy manana olana izahay amin'ny vahoaka Karibeana miady ho an'ny zon'izy ireo mba handray fanapahan-kevitra heveriny fa mety ho azy ireo sy / na ho an'ny fianakaviany. Hevitra adala ny fanovana lalàna / fampiharana lalàna hisorohana ny olona tsy hanana fivelomana raha toa ka misafidy ny tsy hanao vaksiny. Amin'izay rehetra voalaza dia manantena izahay fa mety ny ataon'ny mpitarika Vincentian. Tsy ny herisetra velively no vahaolana raha tsy hoe valin'ny herisetra mihatra aminao angaha izany.
Nanampy ilay Trinidadiana Amilcar Sanatan hoe:
Mitabatabà. Mihiakiaha. Mihorakoraha amin'izay rehetra tadiavinareo. Tohero ary mihetseha. TSY AZONTSIKA LEFERINA NY HERISETRA ho fomba hampitana hafatra any Karaiba.🇻🇨
Nahazo fitsaboana ara-pahasalamana ny praiminisitra Gonsalves ary voalaza fa salama tsara, saingy tsy toy izany no azo ilazana ny fanitsiana ilay lalàna momba ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny firenena.
16 ora izaySuriname